Qmemory Kaadị Iweghachite Nsogbu? Edozi!
> Resource> Naghachi> Qmemory Kaadị Iweghachite Nsogbu? Edozi!
Biko nyere m aka weghachite Photos si My Qmemory Kaadị
My Qmemory kaadị ebe nchekwa, nke bụ na kaadị ebe nchekwa nke m Sony igwefoto dijitalụ, e formatted site nwunye m. Ọ na-eche na ihe nile osise n'ime ya e bufee. Ma m nọ na-eme nke ahụ. Ugbu a niile foto nke anyị njem Rome na-ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, bụ n'ebe ọ bụla echiche iji weghachite foto ndị si m formatted Qmemory kaadị?
Digital igwefoto foto ike ga-efu n'ihi elezighị formatting ma ọ bụ nhichapụ, usoro njehie na-emerụ kaadị. Ọ bụ mgbe a omume ọma nkwado ndabere na mpaghara Foto ndị dị na kọmputa gị ugboro ugboro. Ma ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enwe foto ọnwụ nsogbu, ọ dịghị mkpa ka-kwa nchegbu.
Qmemory kaadị ebe nchekwa mgbake mbipụta pụrụ n'ụzọ dị mfe edozi ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ezi data mgbake usoro. Were Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac ka ihe atụ, a na ịba uru ike weghachite foto na vidiyo si gị Qmemory kaadị, n'agbanyeghị ihe mere na-akpata data ọnwụ. Download ikpe mbipute na-amalite Qmemory kaadị mgbake ugbu a!
Nzọụkwụ na-agbake Data si Qmemory Kaadị
E nwere otu na-achị mkpa ka ị mara tupu na-mmalite: furu efu data nwere ike n'ezie okụrede naanị mgbe ọ na-kpuchie site ọhụrụ-abịa data. Nke a pụtara, ọ bụrụ na ị na-gị Qmemory kaadị ejibeghi,-ekwe omume n'ihi na ị na-azụ gị data dị ukwuu.
Nzọụkwụ 1 Malite Qmemory Kaadị Iweghachite na "Echefuola File Iweghachite" mode.
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery, ị ga-ahụ 3 mgbake ụdịdị na mmalite interface, niile e depụtara na zuru ezu ntuziaka.
Iji naputa ehichapụ ma ọ bụ formatted foto ndị si gị Qmemory kaadị, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Qmemory Kaadị anya n'ihi na Lost Files
Ebe a na omume window, ị ga-ahụ niile ike draịva na kọmputa gị na-achọpụtara na-egosipụta. Ya mere, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Qmemory kaadị na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu.
Cheta na: Ị nwere ike naghachi data si Qmemory kaadị nanị mgbe ọ ga-ghọtara dị ka a na diski ike na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 weghachite Data si Qmemory Kaadị
Foto na vidiyo furu efu gị Qmemory kaadị niile ga-achọpụtara na depụtara na omume window. Ịnwere ike ihuchalu ma ọ bụ na-ele foto video aha elele ma gị niile furu efu faịlụ a hụrụ ma ọ bụ.
Mark faịlụ ị na-aga iji weghachite, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike pịa "Naghachi" ma họrọ otu folda na kọmputa gị na-Natara faịlụ.
Top 10 iPhone ndabere extractor maka Windows na Mac
All mkpa ka ị mara banyere EFI usoro nkebi
Olee otú iji weghachite ehichapụ ozi ịntanetị